Rocinante: lazainay aminao ny tantaran'ny soavalin'i Don Quixote | Soavaly Noti
Iza koa no tsy mahalala firy ny tantaran'i Alonso Quijano, lehilahy tompokolahy niantso ny tenany hoe Don Quijote an'ny La Mancha, izay ny fikasana dia ny hiezaka hanampy ny mahantra sy ny sahirana ary hahatratra ny fitiavan'ilay lazaina ho Dulcinea del Toboso, izay tantsaha antsoina hoe Aldonza Lorenzo.
Eny, tamin'ireny dia rehetra ireny dia niaraka tamina soavaly iray izy. Ny biby izay lasa mariky ny fitoviana rehetra dia, niaraka tamin'ny olombelona nandritra ny 2000 taona mahery, ary namela azy ireo hahatratra faritany tsy fantatra taloha. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity soavaly quixote, amin'ny maha-olona manan-danja azy ao amin'ilay tantara, nefa koa amin'ilay namana izay nanampy anay handroso.
1 Nanao ahoana ny soavalin'i Don Quixote?
2 Tantaran'i Don Quixote sy soavaliny Rocinante
3 Don Quixote anio (tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX)
Nanao ahoana ny soavalin'i Don Quixote?
Raha mikasa ny hanao dia lavitra ianao ary miaina amin'ny fotoana mbola tsy namoronana fiara dia mila soavaly mailaka ianao, manana hozatra tsara, ary manana tongotra matanjaka sy mahatohitra koa, satria tsy fantatrao hoe rahoviana ianao no mahita amin'ny filàna mihazakazaka haingana. Nanapa-kevitra izany i Miguel de Cervantes, mpanoratra ny tantara ny tena mpiaro azy dia tsy maintsy nitaingina soavaly tokana sy tena manokana. Corcel dia teny izay midika soavaly malaky sy haingana, avo be, izay ampiasaina amin'ny ady sy fifaninanana.
Ananany ny soavaly, fa inona no hiantso azy? Nanapa-kevitra izy fa hevitra tsara kokoa ho an'i Don Quixote ny tenany manapa-kevitra, satria izy rahateo no ho soavaliny. Saingy tsy mora ho azy izany. Araka ny hitantsika ao amin'ny boky:
«Efatra andro no lasa naka sary an-tsaina hoe iza no anarana homeny azy ... ary rehefa avy namorona anarana maro izy, dia nofafany sy nesoriny, nampiany, navoakany ary nataony indray tao an-tsainy sy tao an-tsainy, farany niantso azy Rocinante, anarana amin'ny heviny avo, sonorous ary manan-danja tamin'ny naha-izy azy fony izy mbola kely, talohan'izay naha-izy azy ankehitriny, izay teo aloha sy voalohany indrindra teto an-tany ».
Eny eny. I Rocinante dia tsy soavaly nanana fiainana mora. Tsy azony daholo ny sakafo nilainy rehefa lasa olon-dehibe izy. Zanaky ny zana-boriky izy, dia tsy nisy tsy nananany ary, noho izany, salama tsara izy; nefa tsikelikely dia nanomboka nihena izy. Nanjary mahia izy, lasa kely noho ny hoditra sy taolana izy. Na izany aza, io no soavaly tsara indrindra notadiavin'i Don Quixote, satria azonao atao ny mamaky amin'ny iray amin'ireo pejin'ilay tantara: » tendrombohitra tsara kokoa noho ilay malaza Babieca del Cid sy Bucephalo nosoratan'i Alexander the Great ».
Tantaran'i Don Quixote sy soavaliny Rocinante
Mandritra ny tantara dia afaka mamaky ny isan'ny hetsika nitranga tamin'i Don Quixote sy ny soavaliny sarobidy isika. Sancho Panza, ilay mpiara-dia amin'ny olombelona tsy afa-misaraka amin'ilay lazaina ho Knight, indray mandeha dia nasehony fa tsy tiany be ilay soavaly. Ohatra, rehefa miakatra eo amboniny ianao handroaka teny tsy dia mahafinaritra loatra: »nanandrana nihanika avy teo amin'ny soavaly nankany amin'ny fefy izy; ary noho izany, avy eo ambonin'ilay soavaly dia nanomboka nilaza ompa sy fananarana be dia be ho an'ireo izay nanohana an'i Sancho izy, ka tsy azo atao ny manoratra azy ireo.… ».
Sancho dia toetra iray izay, raha omena fotoana mety, Tsy hisalasala izy hanova soavaly mahia ho an'ny hafa:
«Ny azonao atao miaraka aminy (ny ampondran'i Sancho no resahiny) dia ny hamelana azy amin'ny asany, ankehitriny dia very izy na tsia; satria ho be dia be ny soavaly hananantsika aorian'ny fandresentsika, ka mbola atahorana i Rocinante, aza atakalo hafa… ».
Soa ihany fa tsy namela izany zavatra izany i Don Quixote: »Mbola manantena an 'Andriamanitra sy ny reniny voatahy aho, voninkazo sy fitaratry ny soavaly, fa ho hitanay tsy ho ela izahay roa izay tadiavinay: ianao miaraka amin'ny tomponao any aoriana; ary izaho, eo amboninao, dia mampiasa ny anjara fanompoana mba hanipazan'Andriamanitra ahy amin'izao tontolo izao». Tsy isalasalana fa ity lehilahy lehibe ity, na dia tsy mihoatra ny toetra amam-panahy noforonin'ny eritreritry ny iray amin'ireo mpanoratra espaniola malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra aza, dia ohatra iray harahina ho an'ireo izay manaja sy mikarakara soavaly.
Don Quixote anio (tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX)
Hatramin'ny nanontana voalohany azy tamin'ny fiandohan'ny taona 1605, ny tantaran'i Don Quixote, ankoatry ny tonga hatrany amin'ny faritra rehetra eto an-tany, Izy io dia nanjary aingam-panahy ho an'ireo mpitendry mozika, mpanoratra tantara an-tsarimihetsika na horonan-tsary, ary raha mbola tsy ampy izany, tantara an-tsary efa natao, toa an'i Quixote (2000) nataon'i Will Eisner. Toy izany koa, misy azy amin'ny Internet, toy ny amin'ny vavahadin-tserasera YouTube.
Ary io dia, tantara toa izao, maharitra foana.
Manantena izahay fa efa nahafantatra zavatra betsaka momba an'i Rocinante, soavalin'i Don Quixote ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Rocinante, soavalin'i Don Quixote